SIRCULUS: Qeybta 1-aad Jaajuusnimada iyo qiyaanadii uu xilka ku helay Taabit Cabdi iyo sida loo qiyaanay Farmaajo
Friday May 26, 2017 - 01:00:05 in Somali News by Super Admin
(Rating 4.0/5 Stars) Total Votes: 8
Waagacusub.net - Waxaa mudo laga joogo afar asbuuc la magacaabay Gudoomiyaha ahna Duqa Magaalada Muqadishu, Mudane Thabid Cabdi Maxamed, dad badan ayey ku noqotay yaab iyo fajac sababta keentay in will dhalinyaro ah oo aan khibrad u lahayn howlaha m
Sawirka Tabit iyo Naagtii uu Sweden ku qabay
Waagacusub.net - Waxaa mudo laga joogo afar asbuuc la magacaabay Gudoomiyaha ahna Duqa Magaalada Muqadishu, Mudane Thabid Cabdi Maxamed, dad badan ayey ku noqotay yaab iyo fajac sababta keentay in will dhalinyaro ah oo aan khibrad u lahayn howlaha maamulka gobolka aqoontiisa tacliimeedna ay aad u gaaban tahay in mas'uuliyad balaaran oo ka wayn loo magacaabo. Sababo badan ayaa ka danbeeyo magacaabista Thabid Cabdi waxeyna salka ku haysaa arrimo siyaasadeed iyo mid qabiil.
Qormadaan kooban waxaa laga soo jaray qoraal dheer oo ku qoran luuqadda Ingiriiska oo dhawaan soo bixi doona. Ujeedada qormadaan waxa ay tahay in shacabka Soomaaliyeed loo iftiimiyo sababaha ay salka ku hayso magacaabista Mudane Thabid. Ujeedada qormadaani ma aha in sharafka mas’uulka meel looga dhaco ama laga been abuuro balse dulucdeedu waxa ay salka ku haysaa in umadda Soomaaliyeed loo soo bandhigo taariikhda mas’uulka maamulayo danahooda iyo dareenka ku wajahan mustaqbalka deegaanka gobolka Banaadir iyo culayska ka imaan kara.
Thabid Abdi Maxamed waxaa uu xiriir qoys hoose kala dhaxeeyaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xassan Shiikh Maxamuud isaga oo qabo gabadh uu abti u yahay Madaxweyne Xassan. Thabid oo qaxooti ku ahaa dalka Sweden ayaa si sharci darro ah ku misana isaga dhiibay dalka Ingiriiska.
Sanadkii 2013 waxaa madaxweyne Xassan Sheikh u magacaabay ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada. Inkastoo dad badan ku eedeyeen madaxweyne Xassan in uu xubin qoyskiisa ka mid ah u dhiibo mas’uuliyad Qaran, haddana Madaxweyne Xassan Sheikh ayaa cadaadis kaga yimid qooyskiisa waxa uu siiyay mudane Thabid fursad uu uga shaqeeyo mdaxatooyada waxna ku barto. Waa nasiib xumo ku dhacday umadda Soomaaliyeed in danaha Soomaaliyeed la qabiileeyo, qaranimadiina lagu badasho tol-jecleesi.
Mudo sanad gudahooda ah ayaa Thabid Cabdi shaqadii laga ceyriyay, ka dib markii uu gudan wayay mas’uuliyadii uu u hayay dowladda. Colaad uu ka qaaday luminta shaqadiisa ayaa waxaa Thabid Cabdi go’aansaday in uu dagaal ku qaado Madaxweynaha iyo la taliyeyaashiisa gaarka ah. Waxaa uu koobi (copy) ku sameeyay ama uu daabacday dhamaan qoraaladii yiilay Madaxtooyadda ee isaga lagu aaminay, kuwaas oo ka koobnaa Copy electronic ah iyo qaar daabacan. Lap-top kii uu ku shaqaynayay waa uu qaatay isaga oo adeegsanaya xiriirka qooyska Madaxweyne Xassan Sheikh. Hantida uu ka xaday madaxtooyada waa hanti Soomaaliyeed.
Thabid waxa uu xirir dhaw la sameeyay dhowr hay’adood iyo qaar ka mid wadamada daneeyo arrimaha Soomaaliya iyo hay’ado sirdoon ah. Waa qof dhalinyaro ah faham buuxana ka haysan dhibka ka Imaan karo ficilkiisa iyo dhaawaca ay gaarsiinayso danaha dowladda iyo umadda Soomaaliyeed.
Hay’adaha uu la xiriiray waxaa ka mid ah Hay’adda kormeerka iyo cunaqabateynta UN-ta ee loo yaqaano UN Monitoring Group. Waxaa la dajiyay hotel ku yaalo Nairobi oo loo yaqaano Windsor Hotel. Saraakiil ka mid ah UNMG oo aanan doonaynin in magacooda la sheegin ayaa noo sheegay in Thabid Cabdi uusan hadal kaliya keenin laakiin waxa uu la wadaagay dhamaan dokumiintigii madaxtooyadda iyo qormooyin la xiriira safarkii madaxweyha iyo guud ahaan dowlada Soomaaliya. Sida ku qoran qoraaladda qaar waa kuwo mustaqbalka Maxkamad caalami ah loo adeegsan karo.
Tusaale waa loo soo qaadan karaa qormadii UNMG, report 2014/2015 soo baxay inteeda badan waxaa uu salka ku hayay xogta uu keenay Thabid. Waxaa ka mid ahaa fariimaha uu keenay cod laga soo duubay mas’uuliyiinta ugu sareeysa dalka. Wadamada qaar waxa ay go’aansadeen in aan la faafin codadkaas madaama qarinimadda Soomaaliya dhib wayn ka soo gaari karto. Dowlad ka mida dowladaha waa wayn waxa ay ka digeen in lagu fogaado in la faa’fiyo codadka laga soo duubay mas’uuliyiinta qaranka. Waxaa si toos ah uga biyo diiday Dowladda Ingiriiska oo iyada horay u taqiinay Thabid kuna baratay markii uu ahaa ku xigeenka agaasimaha Madaxtooyada.
Xiligii uu ahaa ku xigeenka agaasamaha madaxtooyadda ayaa safaradda Ingiriiska ee Soomaaliya ka balan qaaday madaxtooyadda Soomaaliya in ay qarash ku bixinayso sidii madaxtooyada looga dhigi lahaa meel aan xabad karin ama bullet proof area, gaar ahaan albaabada iyo dariishadaha madaxtooyadda, talaabadni waxa ay ka danbeeysay ka dib markii dhowr mar la soo weeraray madaxtooyada dhawacna uu ka soo garay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, kuwaas oo ku dhaawacmay bur-burkii muraayadaha. Nasiib xumo Thabid Waxa uu jeebka ku shubtay lacagtii isaga oo dhowr dariishad si been abuur ah ah u sameeyay. Arintaas waxa ay safaarada UK u saartay audit, safiirkii hore ee UK, mudane Neil Wigan ayaa si toos ah ula socodsiiyay Madaxadaynaha gafka uu galay Thabid. Sababataan awgeed iyo kuwa kalaba oo dowlada UK u gaar ah waa ay diiday iney dhagaysato Thabid ama qiimeeysana warbixintiisa codka iyo tan qoraalka ahba.
Sidoo kale Thabid waxa uu la wareegay computers iyo hanti kale oo ay hay’adda IOM ugu deeqday madaxtooyadda. Qaar ka mid hantidaas waxaa lagu wareejiyay hotel uu Thabid ka dhistay magaalada Muqadishu oo lagu magacaabo Panafrique Hotel. Hadii aad hotelkaa jiifatay ama aad wax ka cuntay waxaad ku arkaysaa qalabkii laga soo wareejiyaya IOM. Waxa aan la xiriirnay USAID oo bixisay qarashka lagu maal galiyay hantidaas. Qarashkaas waxaa la soo marsiisay hay’adda IOM. USAID waxa ay inoo sheegtay in uu socoto baaritaan la xiriirta arintaan.
Madaxweyne Xassan Shiikh iyo Ra’isal Wasaaraha dalka oo ka war helay sirta uu ka bixiyay Thabid Cabdi, gaar ahaan Ra’isal Wasaaraha dalka ayaa u yeeray Thabid kana codsaday in uusan u dhaqmin sidii qof caruur ah isla markaana sharafka dalka ilaaliyo. Xogta uu gudbiyana ay tahay sir Qaran. Walow uu Xasan Sheekh amar ku bixiyay in la soo xiro Thabit, ayaa waxaa arrintan hor istaagay Nuurto Sheekh oo ah madaxweynaha walaashii oo uu Thabit qabo gabadheeda Jihaan.
Hadii Soomaaliya ahaan lahayd dowalad ku dhaqanta sharciga, dowladnimo buuxdana ka jirto dalka, waxaan shaki ku jirin in Thabid Cabdi xabsiga loo taxaabi lahaa amaba dil lagu xakumi lahaa. Waxaa nasiib xumo ah intii Xabsi la dhigi lahaa ama sharci la horkeeni lahaa, in loo magacabay jago xasaasi u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Tani waxaa ay qayb ka tahay talo xumidda iyo dhibaatada hoogaan la’aaneed ee ka jirto dalka Soomaaliya.
Sida ay noo xaqiijeen qaar ka mid ah qoyska madaxweynaha, Cadaadis kaga yihimd qoyska madaxweynaha ayaa mudo laga joogo labo sano waxaa Thabid Cabdi Maxamed loo magacaabay Qunsulka (Deputy Mission) ee safaaradda Soomaaliya ee Washington DC. Arintaan waxaa durbadiiba ka soo horjeestay dhamaan lataliyayaasha madaxweyaha iyo qaar ka mid golaha wasiiradda, nasiib xumo madxweynuhu wuu ku adkeysay magacaabista Thabid.
Sida aan qiyaasayno, marka laga soo tago cadaadiska qooyskiisa, u soo dirida Washington DC waxa ay ugu muuqatay mudane Xassan Sheikh in Thabid joojin doono bixinta sirta Qaranka iyo la dagaalanka Madaxweynaha ama lagu maslaxo si uu u joojiyo dagaalka uu ku hayo madaxweynaha, madaamaa uu sir badan uu ka hayo madaxweynaha. Waxaa nasiib xumo ah in uu ka sii daray. Marka uu yimid Washington DC waxa uu durbadiiba bilaabay in uu la xirto mucaraadka doowlada una isticmaalo xafiiska safaaradda Soomaaliya goob loogu shaqeeyo dano ka soo horjeedo danta dalka iyo dadka. La soco qeybta 2-aad
Waagacusub.net - Dawladda Somalia oo uu hogaanka u hayo Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo aan ka mid ahayn Urur Diimeedyadda ka jira Somalia ayaa markii ugu horaysay waxaa la dareemayaa in Xafiisyadda Maamulka ay awood ku yeelanayaan Xubno ka socda Urur Diimeedyadda Somalia. Full Article